Umatshini ongemva nasemaFundeni-iChina ibuya kunye nabavelisi beebheyi, abaxhasi
X-imilo yokumisa imeko
Izixhobo eziphezulu kunye neziphefumulayo ezinokuphefumla zikunceda ukuphucula ukuma okungahambi kakuhle, ukuncedisa umva wakho, igxalaba kunye nentamo, ukugcina umqolo wakho ulungelelaniswe kwaye uthe tye ngalo lonke ixesha. Ngokungafaniyo nolungiso oluqhelekileyo lokulungisa olungqongqo kunye nokuthintela ukuhamba kwengalo. Lungisa imitya efanelekileyo kumadoda nabafazi ngawo onke amaxesha onyaka. Ungayinxiba phantsi kweengubo zakho kwaye iyabonakala.
Uyilo olusebenzayo lokuma kwegxalaba, kunye nokuthunga, kunye nokuphuculwa kwendlu, ukuphucula ukuma kwakho ukuze ubonakale umde kwaye unentembelo, uthoba amahlombe nentamo, usekele inkumbulo yemisipha, umxholo okhethwe kakuhle weVelcro, uzinze ngakumbi kwaye ukhusela umsipha. Ilaphu lithambile, linokuphefumla kwaye likhululekile, kulula ukunxiba kwaye ulisuse ngotshintsho lwamagxa.
Inkxaso yangasemva yokudlala
Iyaphula kwaye ikhululekile kwaye ilaphu lokomisa ngombane, ayizisuli iingalo, ibanzi kwaye iqinile ngesikhumba isixhaso ngasemva ngebhanti ende ende, impahla ekhethwe kakuhle yeVelcro enamathela ngokuqinileyo, ezinzile ngakumbi, phucula ukuma kwakho ukuze ubonakale umde kwaye ukuzithemba, ukuthambisa iintlungu zegxa kunye nentamo, kulula ukuyinxiba nokuzisusa ngeqhina elihlaziyekayo.